SABOTSY 15 DESAMBRA 2018
ANTSIRANANA : Tovovavy 20 taona nangalatra tao amin’ny toeram-piasany voasambotra
Tovovavy iray 20 taona mpiasa an-trano no voasambotry ny polisy tao Ambilobe, ny sabotsy lasa teo. 7 février 2018
Araka ny fantatra dia mpiasa an-trano mikarakara zaza menavava roa volana, kamboty reny tao amin’ny fokontany Mahatsara aty Antsiranana ity tovovavy ity. Nomena fitokisana araka izany ity farany nefa nivadika. Voalaza fa noraofin’ity zazavavy ity ny entana sarobidy tao anatin’ilay trano raha sendra nivoaka ny tompon-trano, izay nenitoan’ilay zazakely.
Tamin’ny zoma teo no nanaovany izany asa ratsy izany. Lasa tamin’izany ny volamena, vola tahiry 400 000Ariary, zava-maneno, fahitalavitra hatramin’ny kidoro. Azo lazaina fa efa voaomana ny teti-dratsiny satria naka posy ilay tovovavy nitondra ireo entana ireo ary nandray fiara avy hatrany nihazo an’ Ambilobe. Araka ny voalaza dia avy any Antalaha faritr’i Sava ity farany, ka nikasa hamonjy fodiana an-tanàna rehefa vao nahazo ireo entana halatra rehetra ireo. Tsy niraviravy tanana ireo fianakaviana voaroba fa niezaka nikaroka ity mpanao ratsy ity ka nanaraka hatrany Ambilobe.
Mbola tratra teny amin’ny vozony sy tanany ireo firavaka volamena izay nangalariny fa ireo entana rehetra indray dia efa teo ambony fiara nitodi-doha hankany Antalaha. Fangalarana, famelàna irery ilay zaza menavava tao an-trano, fivadiam-pitokisana, ireo rehetra ireo no fiampangana ity tovovavy ity. Ankoatra ny fitoriana nataon’ireo lasibatra dia nitsangana ihany koa ny avy amin’ny sampan-draharahan’ny mponina mahakasika ity raharaha ity.
Ny talata 6 febroary no natolotra ny Fampanoavana ity tovovavy 20 taona nahavanon-doza ity. Ho fantatra eo izay mety ho tohin’ny raharaha.
Takian’ ny vahoakan’ ny faritra iva andeha hisotro ronono Ravalo HETSIKA TETSY AMPEFILOHA (199) 12 décembre 2018 Matotra sy nirindra ny fandaharan-dRajoelina, lainga sy hevi-dravina no nasetrin-dRavalomanana ADY HEVITRA HO ENY IAVOLOHA (178) 10 décembre 2018 Vehivavy iray maty notapahin-doha, tsy hita popoka ny vadiny SAMBAVA (177) 11 décembre 2018 “Tahaka ny fandroahana mpiasa an-trano ny fanalana mpiasam-panjakana” RAVALOMANANA TEO AMIN’NY FITONDRANA (152) 13 décembre 2018 Tsy misy resaka politika ny fisamborana an’i Haja TONIA MPAMPANOA LALANA (144) 9 décembre 2018 Efa ho 580 Miliara fmg ny hetra tsy voaloan’ny orinasa Tiko FITONDRANA JADON-DRAVALOMANANA (112) 10 décembre 2018